Ingwọ gba Ọsọ Na-agba Elu | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIngwọ Speedgba Speedgwọ Ọgba Na-agba Ego Dị Mkpa Kwa ọnwa
24 / 01 / 2020 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
ụgwọ ụgbọ elu dị elu na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa
Ọtụtụ nde mmadụ na-enyocha njem iji ụgbọ oloko dị elu (YHT) ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa na igwe ọchụchọ. Ego ole na-ebulite na ndenye aha ntinye nke NYT kwa ọnwa? Kedụ kedu ịdị elu Speed ​​Train (YHT) ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa?
TCDD kwalitere ọnụego dị elu na High Speed ​​Train (YHT) ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa. N'ịkwuputa okwu banyere nke a, TCDD kwuru na ngwa ahụ bụ 'mgbanwe mgbanwe ego, ọ bụghị ịrị elu'.
TCDD welitere ọnụego elu maka ụbọchị tiketi ịdenye aha ụbọchị 30 na ụgbọ elu High Train ụgbọ elu. Site na tarifụ ọhụrụ ahụ, ụgwọ nke ndenye aha YHT n'etiti Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, nke ụmụ akwụkwọ na ndị isi na-amụ na Ankara ji, amụbawo site na 480 TL ruo 687 puku.
Site na ịrị elu ahụ, ndị njem niile na-azụta tiketi site na ụgbọ ala azụmaahịa ka a ga-akwụ ụgwọ klas azụmaahịa zuru oke n'agbanyeghị ego ma ọ bụ kaadị njem ha anaghị akwụ ụgwọ.
Dabere n'ụkwụ ndị TCDD mere na ntinye aha, ọnụahịa ndị a dị ka ndị a:
Ankara-Polatlı sitere na 220 TL ruo 877 TL.
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya mụbara site na 480 TL ruo 687 puku.
Polatlı-Eskişehir mụbara site na 352 ruo 260 TL.
Ankara-Istanbul mụbara site na 2 puku 100 TL ruo 3 puku 847 TL.
Polatlı TCDD - Konya High Speed ​​Train Lines Project Nrụpụta Ihe…
Polatlı TCDD - Konya High Speed ​​Railway Lines Electrification Systems inin
Ọdịdị dị elu na ọrụ, nakwa na ọrụ | Nkụzi Ọdịdị Dị Elu
Subsgwọ ndenye aha ọnwa nke YHT